Soosaarista Jilif Yohimbine, Quercetin, Soosaarista Abuurka Griffonia - Ruiwo
Yohimbine jilif soosaar
Soosaarista Garcinia Cambogia
Alfa lipoic acid 99%
Shaanxi Ruiwo Phytochem Co., Ltd. shirkad wax-soo-saar heersare ah, oo u heellan cilmi-baarista iyo horumarinta, wax-soo-saarka iyo iibinta dhirta dabiiciga ah, monosour Active, Walxaha ka kooban. Waxaa naga go'an inaan siino agab joogto ah iyo adeegyo cusub oo macaamiisha ah ee warshadaha dawooyinka, daryeelka caafimaadka, qurxinta iyo wixii la mid ah.
News / Bandhig
Quercetin faa'iido leh
Weligaa ma maqashay Quercetin? Quercetin waa antihistamine-ka dabiiciga ah ee laga helo khudaarta iyo khudaarta waxa ay la xiriirtaa jir caafimaad qaba faa'iidooyinkuna waa cimri dhererka nolosha,wadnaha caafimaad qaba iyo in ka badan 1 Quercetin ayaa hoos u dhigta...
WAA MAXAY GRIFFOONIA SEED SOO SAARE 5-HTP
Waa maxay 5-HTP? 5-HTP waa amino acid dabiici ah oo ku jira jidhka bini'aadamka iyo kiimikooyinka horudhaca ee serotonin. Serotonin waa neurotransmitter ka caawiya soo saarista kiimikooyinka naga dhigaya mid wanaagsan. Jidhka bini'aadamku wuxuu soo saaraa serotonin isagoo mara wadooyinka soo socda: tryptophan→5-HTP→serotonin. Kala duwanaanshaha...
Cilmi-baaristu waxay ogaatay faa'iidooyin caafimaad oo badan oo Quercetin ah
Quercetin Dihydrate iyo Quercetin Anhydrous waa flavonol antioxidant ah, kaas oo si dabiici ah ugu jira cuntooyin kala duwan, sida tufaaxa, plums, canabka cas, shaaha cagaaran, ubaxa iyo basasha, kuwani waa qayb ka mid ah. Sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Market Watch, sida faa'iidooyinka caafimaad ee querceti...
Ruiwo waxa ay muhiimad gaar ah siinaysaa dhismaha nidaamka tayada, ee ku saabsan tayada nolosha, waxa ayna fulisaa heerarka GMP si adag si loo ilaaliyo tayada sare. Haddana waxaan ka gudubnay shahaadada 3A, ISO9001, ISO14001, HACCP, Kosher, Xalaal iyo shatiyada wax soo saarka cuntada (SC).
● Dhaqanka Shirkadda ● Kooxda ● Sawirka
Tusaalaha bilaashka ah adiga
Muunad bilaash ah ayaa loo soo bandhigi karaa imtixaan ama cilmi baaris.
Guji si aad u hesho muunado
Qolka 703, Ketai Building, No. 808, Cuihua South Road, Xi'an, Shaanxi, Shiinaha.
Fariin ka tagista